Semrush waxay kudareysaa Qalab si aad ugu gurguurto boggaaga oo aad uhesho arrimaha HTTPS | Martech Zone
Haddii aad waligaa u baahnayd inaad ka faa'iideysato qalabka soo-saareyaasha biraawsarka si aad isugu daydo inaad ula socoto sawir khayaano ah ama aad ku darto taas oo aan ammaan ahayn, waad ogtahay sida ay u jahwareersan tahay. Nasiib wanaag annaga, waxaa jiray casriyeyn cajiib ah Xeebahadhammeystiran Xisaabaadka Goobta - ku darista ah HTTPS hubiyaha.
Hadda waad sameyn kartaa hubin qoto dheer oo ah HTTPS kaas oo daboolaya 100 boqolkiiba talooyinka amniga Google.
Maxay HTTPS muhiim u tahay?
Ka guurista HTTP una guurista HTTPS kaliya kuma fiicna in la haysto, waa wax badan oo qasab ah. HTTPS waxaa loo hirgaliyay si loo ilaaliyo asturnaanta iyo sharafta macluumaadka ay isweydaarsadeen biraawsarkaaga iyo shabakada: cookies, logins iyo passwords, faahfaahinta kaarka bangiga, iwm. Dadka ku soo booqanaya way ku sii jeclaan doonaan adiga hadaad HTTPS leedahay, maxaa yeelay waxay dareemi doonaan amaan aad u badan markii ay galaan xogta boggaaga.
Maxay HTTPS Ugu Baahan Tahay Hubinta
Geedi socodka guuritaanka HTTP ilaa HTTPS waa safar cakiran, ilaa aad si sax ah u hirgelisid HTTPS mooyee, dhammaan dadaalkaaga si aad u noqoto ilaaha amniga waa la khasaari doonaa. Khaladaadka ugu badan waxaa ka mid ah waxyaabaha sida:
Shahaadooyinka ka diiwaangashan magaca bogga khaldan
Tilmaamaha magaca adeegga ee maqan (SNI)
Noocyada hab maamuuska hore
Waxyaabaha amniga isku dhafan.
Si ka duwan baaritaanka kale ee HTTPS ee jira, Xeebaha wuxuu si sax ah kaaga sheegayaa meesha iyo nooca qaladka aad gashay iyo sida loo saxo. Hubiyaha Goobta HTTPS Checker wuxuu leeyahay istcimaalo ku habboon isticmaalaha oo leh dhammaan jeegagga lagu soo bandhigo qaab cad. Sida ugu fiican oo dhan, jeegagga waxaa lagu dhisay iyadoo lagu saleynayo Talooyinka hirgelinta HTTPS ee Google.
Bixinta: Waxaan ku xiran nahay Xeebaha
Tags: baadi biraawsarkahttpsjeegareynta httpshttps gurguurtaCilad httpswaxyaabaha iskujirabogag aan amni ahaynpagessemrushhanti dhowrka goobta